WidhWidh Online » News » Daawo Sawirrada aroos wadareedkii ugu weynaa oo taariikhda dhaw dhaca oo kumanaan leesugu guuriyay.
7:03 am » War Naxdin Leh:Weerarkii Xarunta UNDP oo laga abaabulay Madaxtoyada Somaliland 6:54 am » Breaking News Shil Baabuur oo Ka Dhacay Duleedka Magaalada Lascanood iyo Dhimasho, Dhaawac (Daawo Sawirada) 4:07 am » Brazil Oo Deyntii Wembley Iska Soo Guday Waxa Ayna Maxico Ka Tuureen Tartanka Qaaradaha 3:52 am » General Cali Horseed kamid ah Saraakiishii Hore ee Soomaaliya oo Ka Hadlay Qarixii Ka Dhacay Muqdisho (Halkan Ka Dhagayso) 3:48 am » Maxuu Ka Yidhi Col, Warfaa Sheekh Aadan Qarax ka Dhacay Ceel-cadde iyo Dhaawicii Yaasiin Raadeer(Halkan Ka Dhagayso) 3:47 am » Dhaqanka Hawiye ” Muqdisho kama dhaxayso Umadda Soomaaaliyeed, Tarsan yuusan dadka been u sheegin”(Halkan ka Daawo Adiga Uun Ha Qosolin) 3:42 am » Madaxwaynaha Maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe oo Booqday Dhaawicii Col. Yaasiin Raadeer ee Nairobi(Daawo Sawirada) 3:29 am » Booliiska Dalka Canada oo jirdilay hooyooyin Soomaaliyeed iyo qayladhaan ka Timid Soomaalida(Daawo Video) 3:22 am » SIDEE LAGU SUGi-KARAA NABADA MAGAALADA MUQDISHO? 3:22 am » Nin u dhashay Dalka Jaban oo Mudo 10-sano ku Dhow Baranayey inuu Daanyeer Noqdo(DAAWO VIDEO LA YAAB LEH) Daawo Sawirrada aroos wadareedkii ugu weynaa oo taariikhda dhaw dhaca oo kumanaan leesugu guuriyay. Published on Feb 19 2013 // NEWS, WARAR, Wararka Somalia ShareKaniisada lagu magacaabo Unification Church ee dalka Kuuruiyada koofureed ayaa waxa ay qabatay xaflada arooseed si wadar ah leesgu guurinayo 3,500 oo lamaane oo ka kala yimid 70 dal uu dunada kamid ah.
Xaflada oo Axadii dhacday ayaaa waxa ay aheyd tii ugu horeysay ee nuuceeda ah ee Kaniisadu qabato tan iyo geeridii aasaasihii Kaniisada Reverend Sun Myung Moon oo sanad kahor dhintay.
Waxaa xaadir ku ahaa halka xafladu ka dheceysay ilaa 20,000 saraakiil kaniisadeed ah waxaana lasheegay in ay si live ah ugala socdeen aaldaha livestream-ka sheekada 8,500 oo lamaane kuwaas oo xaflada lagu xasiimay.
Unification Church ayaa waxa ay sheegataa in ay xubna malaayiin ah kuleedahy dunida daafaheeda kala duwan
Xaaskii uu ka geeriyooday aasaasihii Kaniisadaan oo lagu macgabaabo Hak Ja Han,ayaa iyadu waxa ay u hanbaleyneysay lamaanayaasha is guursanaya.
War Naxdin Leh:Weerarkii Xarunta UNDP oo laga abaabulay Madaxtoyada Somaliland